Sambava: Tsenabe lavanila iarahana amin’ny Fairetrade Africa
vendredi, 19 octobre 2018 18:28
Natao izao tsenabe izao dia mba hivondronan’ireo fikambanana sy ny koperativa ireo mba hizara traikefa eo amin’ny fahaizamanao ny fambolena amin’ny famokarana lavanila indrindra, ary amin’ity ihany koa dia fotoana iray hahafahin’izy ireo mihaona mivantana amin’ireo vahiny izay mpanafatra ity vokatra ity avy aty amintsika.
Nitaraina kosa ireo tantsaha mpamokatra lavanila fa mahatsiaro natao ambanin-javatra ihany nefa lazaina fa ny lavanila anisany mampidi-bola betsaka ho an'ny Fanjakana.
Dr Nyagoy Nyong’o no nitarika ny delegasionan'ny Fairtrade Africa miatrika izao tsenabe izao, izay atao anatin'ny telo andro.
Nilaza i Sabotsy Samuel, Sekretera jeneralin'ny Faritra SAVA, fa ny fanjakana dia manara-maso ny fampandehanana ity vokatra lavanila ity satria izy no fanalahidin'ny fampandrosoana ato amin’ny Faritra SAVA sy manerana an'i Madagasikara, ary isika SAVA no mpamokatra azy voalohany eto Madagasikara.
Sambava: Jeritodika momba ny sehatra lavanila
Ivato: Première édition de la Foire Internationale des « Gemmes et Bijoux de Madagascar » »